HomeAfaan OromooOromiya’s Maraamartoo Politics (an opinion piece)
“Akka Haroon Hinguunee, Akka Raachi Hindunee” jedha Mammaksi Oromo
Yaadni Obbolessa kiyyaa akkuma jirutti ta’ee garuu xiinxalaa isaa irratti “ODPn ABOn akka mohatamuu sodaatuuf ABO balessuuf adeemaa” kan jedhu dubbate. Akka yaadaa kiyyattii Otoo hooggaanii ODP nagaan nu-ceesisee, ABOn filannoon ODP mohatee, kan mohatu hunda caalaa hummata Oromoo ti. Itti aansee, ODP dha. Sadarka sadaffa irratti ABO dha. ODPn hummata Oromof amanama ta’e argamu isaa qofti akka inni yaadaa fi qalbi hummaticha booji’u isa godha. Egereen siyaasa ODP ifa ta’uu mala. Garuu, atakaroo inni amma ABO, kessattuu WBOn ilallattee hammenya inni hojjachuf tilmamu akka hummanni isa diineffatu karaa bana. ABOn jiraatee dhiisee ODPn jibbamtuu fi yakkamttu OPDO caaltu taa’tee hafti. ODPn ABOn dhabama jedhes hinyaadu. ODPn kan mohatamu, ABOn jiraatee dhiisee hojii isatini. Hojii isattu isa balessaa. Hojii isaatu isa Dagaagsa OPDn. OPDO dhaaba ganttuu, bitamtuu, yakkamtuu, ajooftuu hummannii Oromoo gaafa ishiin akka namaattu bilisa taa’tee yaaduu calabduu hinsimate. Xurii ishii irraa dhiqee, ofitti ishii fudhee haammate. “You can’t throw a baby with bath water” jedha mammaksi Faranjii. Akkuma jecha kanaa, Hummanni Oromoo baldhaan OPDO hudaaniin laaqamte, hudaan ishii fungan isaa qabatee irraa dhiqee ofitti ishii fudhate. Ofitti fudhatee haamachuu bira darbee, gorsa jajjabina, haamilee ishiitti hore. Akkaa Of-bilisomsitu qabsofsise. Sadarkaa nama Bilisaa itti ishii make. Isa bira darbee kennatta itti kennatee jabaadhuu nun adeemii. Siduukaa jira. Hinsodaatiin, Hinmamin, yaadaa hin-hirin, sibira jirra. Wanti fedhe yoodufe sibiraa dhaabbanna Jedhee Onnachise. OPDOns (Team Lammaa) hummattia isaa dhageefatee, qalbeffate, Wayyaanee Tigray aangoo irraa fonqolcuu danda’e. Dhugummatti, kuni hojii bilchina qabuu fii seena qabessa dha. Hummannii Oromoo akka hummata Ameeriaa ‘pragmatist” dha. “Synergy” dhaaba ergamtuu TPLF taate waliin uumeen qabso hummataa sadarkaa amma jiru kanarran gahera. “Synergy” ykn qindominni kun garuu lama otoo hinbulin, Abiy Ahmed akkuma angoo irratti baheen ballessuu jalqabe. Qabso hummatta Oromoo Angoo irratti isa baase , fi galata hummata Oromoo nyaatee Oromummaa irratti caaquu ykn baacuu jalqabe. isa bira darbee, Oromummaan Oromo salphise, Xiqeesse jedhe. Gama biratiin Ilaalcha nafxanyummaa haamileen cabde Olkaasee dibbee dhau calqabe. Hojii maataa fi miilaa hinqabne, kan wal-dha’u fi qal-fallessu hojjachu calqabe. Namichi kuni sammuun isaa sirrii dhaa hoo nama jechisisu calqabne. This man has been sending inconsistent and incoherent message for so long. wanta inni hojjatu, hojjachuuf abbalu, eenyu akka isa gorsuu fi kaanyyo malif akka adeemu baruun rakkisa ta’e. Karaa tokkon Africa Bulchina jedhe hawwaa, kara biraa immo wanta Oromia fi Oromummaa diigu fi balessu hojjata. Namni Africa tokkosuu yaaduu ykn abjootuu fi Oromumaa fi Oromia dinefatu yoo jirate nama abjuu sirna gita-bitotaa tin macha’e dha. Kayyoo sirna Nafxanyaati dhugomsu dha. Yaani kun want haaraa mitti. Mul’ataa Haaraas miti.
Ergan kana jedheen booda, WBO akka diinaatti ilalanii ABO fi WBO dhabamsiisu itti duuluun ODP “muka irraa daabatan of-jalatti muruu” natti fakkata. ODP is shooting itself on the foot. ODP forgot that it is standing on the shoulder of those giants. ODP forgot that these are the ones who liberated them from slavery in the first place. WBO is our first class citizen. They are beyond ABO and its leadership. They are beyond Oromo party politics. If ODP wants to do what is right, start doing the right thing to our First class citizens, the WBO. Give them what they deserve, respect!. You ought to have saluted the WBO before anybody else.
Maalo yaa Lammaa, maaloo yaa Abiy, gochaa Motummaan Hailesilasee gootota akka Balay Zalaqaa Qillxuu, Garasuu Dhukii fi Arabanyota biroo irratti hojjatee maalif WBO irran gahuf kaarorfatu? Yaadumti kun akkamitti isinitti muldh’ate, isinifis liqimfamaa? Dhuguma kuni yaada kessanii moo Ulee dinaa ta’uuf adeemtuu ammallee?.
Ulfina ykn Kabajaa WBOf malu argisifnaan mwanti ODP fi ABO wal-diineffachisu jiraa? Hinjiru!. Boru hinbeekneen, Qodaa bukoshii sagalii akka jedhamu sana hinta’inaa. Oromiyaa fi Oromummaan youmiyyuu hinlalisa. Kabaja bara baraa gotowwan QBOf wareegamani fi wareega baasaa jiraniif.!
Kan hidhaatti guddatte, hiddaa irraa hiiktus bakka itti hidhamaa turte irra fagaattee hin deemtu – qalbiitu gabroomeera jechuu dha. Kan OPDO/ODP’s kanuma fakkaata.
Kana biratti ammoo namoonni qaama kana keessa turan irra caalaan isaani duranuu garaaf itti makaman, achi keessatti tarii yakka dhiifama hin qabne Oromoo fi saboota biroo irratti hojjetaa turan. Warra duuba deebi’uu hin dandeenyetu jiru. Isaan akkasii silaa dursanii of keessaa calaluutu irra ture. Kun hin tahin hafee, amma garsuu isaaniitu humna argachaa deeme fakkaata. Gariin ammoo, gaaffii ummata Oromoo irra aangoo dhuunfachuu fi irra turuu mararfatu.
Osoo beekanii, qabsoo ummatni Oromoo itti dhumee asiin gahe kana fiixaan baasanii, ABO caalaa iyyuu itti galatoomuu (credit itti argachuu) dandahu turan. Akkuma Olansa olitti jedhe, kennatta ummatni itti kennate kana akka inni ‘si malee dhaaba hin qabnu’ jedheetti fudhatun jalqabame. Gooftaa duri, TPLF akkeessuu jalqaban!
Ummata Oromoo irraa hacuuccaa fi shororkaan dhaabatee hin beeku. Kana hundaa keessatti qabsoo isaa itti fufe, ammas itti fufa. Garuu, OPDO/ODP’n ofiif xurii fi qaanii keessatti dhalatte keesaa bahuu hin dandeenye. Qaanii caalaa ammoo ummata Oromoo irratti fiduuf deemti.
Namoota dhaaba kana keessa jiranif fi deggaraniif kan ani dhaamuu fedhu: yoo dhuguma boona ilmi namaa (self-respect) qabaattan, qalbii horadhaa, salphina kana keessaa ofis baasaa, badinsa keessa ummata Oromos tahe biyya Itophiyaa kana baasaa! Carran dhumaa isin qabdan kanuma!